मुखमा मोइ छैन …..मा घ्यु – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 7, 2007 अप्रील 8, 2007 by nepaldiary
मुखमा मोइ छैन …..मा घ्यु
नेपाल डायरी डट कम @ 12.20
त्तात्तो न छारो को सुन्दरी प्रतियोगीता सकीएको छ, बानेश्वेर को अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रमा । नेपाली उखान भन्छन् नि-“पढ्नु, गुढ्नु कौनै काम, हलो जोतो खायो माम” यो लठुवा लाइ भन्ने उखान हो । सुन्दरी प्रतियोगिती र लठुवाको एकै नीयति लाग्छ मलाइ त ।पोहोर परारका ले जस्तै मातृ भाषा पनि राम्रोसङ बोल्न नजान्ने गुथे होलान नी मिस नेपाल को पगेरी(जो सुकैले गुथोस,मलाइ के मतलब ! )आफुले भने सम्मेलन केन्द्र भित्र होइन, बाहिर बसेर मज्जाले हेरियो बिरोध प्रदर्शन। सुन्दर, त अनुहार ले र अर्धनग्न भएर होइन , मिठो बोलि, बचन र असल ब्यबहारले भइन्छ भन्ने आफ्नो “आफ्नै”मान्यता छ ।
भिडीयो अपलोड हुदै…
प्राबिधिक कारण ले हिजो अपलोड हुन नसकेको भिडीयो आज यहाँ अपलोड गरीएको छ ।
कर्णाली र मुगु का जनताले नुन खान नपाउने देस मा ६,६ करोड(प्रदर्सन कारी हरु त्यसै भन्दै थिए।) के को सुन्दरी प्रतियोगीता नी? त्यो पनि सुन्दरी हरुले के नै माखो मारेका छन र? २, ३ वटा बिज्ञापनमा नाच्लान। त्यो पनि अर्धनग्न , बढि से बढि २, ४ वटा देस घुम्लान । नेपाली पोसाक को सट्टामा नग्न/अर्धनग्न (?) भएर बाउ आमाको इज्जत खोलामा मिलाउलान , ङिच्च दात देखाउलान । त्यति न हो ।
न राम्रो बोल्न आउछ्, (बोल्न त नआउनेलाइ लेख्न के आउला र?)न त केहि राम्रो काम गरेका छन । न त अद्वितिय प्रतिभा भएका छन । जाबो क्याट वाक हो की र्याट वाक गर्दैमा सुन्दरी हुइन्छ? मलाइ भने यि सुन्दरी भन्दा कता हो कता सुन्दरी लाग्छन पासाङ ल्यामुहरु, पारीजातहरु, हेलेन केलर हरु र झमककुमारी हरु
जे भए पनि बिरोध प्रदर्शन को फोटो खिच्न गएको । मज्जाले १ लठ्ठि खाइहालियो नलिखुट्टामा । पुलिस दाजु भाइको संमयता फेरी एक पटक देख्न पाइयो ।
एक जना पुलिस का हाकिम को आदेस चै मलाइ अचम्म लाग्यो -छेउमा थुपारीएको इटा देखाउदै भन्दै थियो “उनिहरुले ढुंगा हाने तिमीहरुले पनि हान्नु” । (हे-तस्बिर )
के भन्छन् नी “मुखमा मोइ छैन, के जातीमा घ्यु”। मलाइ भने यो उखान र सुन्दरी प्रतियोगीता उस्तै उस्तै लाग्यो । तपाइ लाइ नी?
अघिल्लो मिस नेपालको बिरोधमा प्रदर्सन
अर्को ढकाल द्वारा राजस्व ठगी
One thought on “मुखमा मोइ छैन …..मा घ्यु”
अप्रील 8, 2007 मा 11:35 बिहान
Sundari pratiyogita ta aafaima naramro haina ni?Globalization ko jamana ta paschhime purbe sanskriti bhanne kura bhaena ni.competition le person lai talent banauchha.malai ta lagchha 1 barsa ma2patak garnu parchha pratiyogita ta.